Hacking - ဒါဟာအရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရုံသာမကဘဲအရာရာကိုပါစဉ်းစားနေတယ် Linux မှ
Hacking - ဒါဟာအရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရုံသာမကဘဲအရာရာကိုပါစဉ်းစားသည်
“ ဟက်ကာ” ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆောင်းပါးမှ «ခေါ်»ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ဟာဟက်ကာတွေလား။»ဟက်ကာဆိုတာဘာလဲ? ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိလှုပ်ရှားမှု၏မူလအစ၊ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အရေးကြီးမှုနှင့်ယင်း၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဆက်စပ်မှု (သို့) ဆက်ဆံရေး အောက်ပါအဓိကအတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ “ Hacker သည်သူသည်အရာရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်မြင်သောကြောင့်အခြားသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုပြုလုပ်သည်။.
ဟက်ကာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်မယုံနိုင်လောက်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရုံသာမကပြproblemsနာများကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်ရုံသာမကအခြားသူများကခက်ခဲသောသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည့်ဆန်းသစ်သောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်သောအရာများကိုတည်ဆောက်သည်သာမက၎င်းတို့အားလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ပျမ်းမျှအတွေးအခေါ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာစဉ်းစားကြသည်။ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်လွတ်လပ်မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သင်ဟာဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီဘ ၀ အတွေးအခေါ်ကချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသင်ပြုမူရမည်၊ ထိုသဘောထားကိုသင့်ကိုယ်သင်ယူဆောင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဖြစ်တည်မှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
2.1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို Hack
2.2 ကျနော်တို့လောင်ယန္တရားများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကို Hacking
ဒါပေမယ့်ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့သဘောထားကိုမွေးမြူဖို့စဉ်းစားမိရင်၊ အထူးသဖြင့်သင်ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ရင် Developer (သို့) အသုံးပြုသူအနေနှင့်ရှိရင်သင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လက်ခံမှုကိုရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ပင်သင်လည်းအမှားတစ်ခုကျူးလွန်နေသည်။
အများကြီးသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်၊ တိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောသူကဲ့သို့သော Hacker တစ်ယောက်ကဲ့သို့လုပ်ခြင်းနှင့်တွေးခြင်း၊ ထို့အပြင်သူသည်ဤအရာများကိုလူများစု၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေရန်အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလေ့လာရန်နှင့်ဆက်ထိန်းထားရန်နှင့်အခြားသူများကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအစေခံသင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာဉာဏ်ရည်သာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဆရာများ၏အတွေးအခေါ်ကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မတူညီသောရှုထောင့်ကနေမတူကွဲပြားသောသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောထင်မြင်ချက်များ၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်သမားရိုးကျမဟုတ်သောအဆိုပြုချက်များနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုအဆုံးမဲ့ခေါင်းစဉ်များဖတ်ရန် / ရေးသားရန်အတွက်ဟက်ကာစိတ်ဓာတ်ရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ငါတစ်ခုခုသတိပေးသင့်တယ် ငါမဖြေခင်မေးခွန်းတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အလေ့အထရှိတယ်။ David Perkins သည်ဟားဗတ်ပညာရေးအကြီးတန်းပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ယူခြင်း၊ နားလည်ခြင်းနှင့်တီထွင်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
နေ့တိုင်းလူတို့သည်ကောင်းသောအတွေးများစွာနှင့်များသောအားဖြင့်မကောင်းသောအရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘဝ၏ကွဲပြားသောဘဝကဏ္personalများဖြစ်သောကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ နိုင်ငံရေးရာထူးများ၊ လူ့ဆက်ဆံရေး၊ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များနှင့်ဘာသာရေးရာထူးများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာမစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဘဝလမ်းကြောင်း၌မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းများသို့ရောက်သွားစေသည်။
အဖြစ်မှန်မှာကမ္ဘာကြီးသည်ရှုပ်ထွေးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူအများကမတူညီသောအကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုဖန်တီးရန်၊ ကူးစက်ရန်နှင့်လက်ချောင်းထိပ်များသို့ပုံဖော်ရန်နှင့်မလုံလောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူများသည်စားသုံးသည့်အကြောင်းအရာများ၏သတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့အားအမြဲတမ်းကျောက်ချရပ်နားပြီးတူညီသောအချက်အလက်များတွင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောရှုထောင့်ကို ဦး တည်လိုသောစိတ်ထားဖြင့်ဤသို့ထင်မြင်ယူဆလေ့ရှိသည်။ သို့မှသာ“ မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ရန်” ဖြစ်သည်။
ဒါက တစ်စုံတစ်ရာသောအတွေးအခေါ် (သို့) ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုနှစ်သက်တတ်သူတွေကတော့ဒီအယူအဆ (သို့) ခေါင်းစဉ်ကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့ (သို့) ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်ကြတယ်မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ် (သို့) ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ မပျော်ရွှင်သောခံစားမှုအလယ်၌၎င်းကိုမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်ကိုအမြဲတမ်းအားဖြည့်ပေးသည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ “ တစ်နည်းအားဖြင့်အတွေး၊ ပြ,နာနှင့်အခြေအနေတို့၏ကွဲပြားသောမျက်နှာများကိုဖြေရှင်းရန်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရမည်” ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားတစ်ဖက်၏ရှုထောင့်သို့မဟုတ်အတွေး၊ ခေါင်းစဉ်၊ အခြေအနေသို့မဟုတ်အုပ်စု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရှုထောင့်တွင်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်အတွေ့အကြုံများကို dramatize လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်ရှိအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းထက် ပို၍ အပြစ်ရှာရန်အဆိုပြုရန်။
ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားတွင်တတိယတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ. ဒါဝိဒ်သည် Perkins
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ပါ၊ “ သေတ္တာထဲမှ” (သေတ္တာထဲမှ) စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုမကြာခဏသုံးပါ၊ မရွေ့နိုင်သော၊ မမှားနိုင်သောထာဝရထာဝရအတွေးအခေါ်များကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေး - နိုင်ငံရေး - ဘာသာရေးအမျိုးအစားများဖြစ်လေ့ရှိပြီးအခြားသူများအကြားနည်းလမ်းအသစ်များနှင့်ရှာဖွေ။ မရသောစွမ်းရည်အသစ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစဉ်းစားတတ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များတွင်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ လှည့်ကွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးနှင့်အားထုတ်မှုများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်၊ မည်သည့်တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူသည်မည်သည့်နေရာတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စုပေါင်းအကျိုးအမြတ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချပုံကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကစဉ်းစားတွေးခေါ်မှကြွလာသောအခါကျနော်တို့ပိုပြီးစမတ်ဖြစ်ရမည်နေရာ။
ဤမျှကြီးမားသောအချက်အလက်ပမာဏရှိသောကမ္ဘာကြီးတွင်မီဒီယာနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများသည်အကျိုးရှိရုံမျှသာရှိကြောင်းမကြာမီနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ Tristan Harris၊ ဂူဂဲလ်ဝန်ထမ်းဟောင်း
နည်းပညာကုမ္ပဏီများ (အင်တာနက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီ၊ မိုဘိုင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက် / ဆက်သွယ်ရေး) သူတို့သုံးစွဲသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်သူတို့၏အပြုအမူနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်များ၏စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကိုအခြေခံသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက် - လူများအားသင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ကြာရှည်စွာထားရန်။ အဘယ်ကြောင့်? ငွေနှင့်စွမ်းအား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းကမ္ဘာသို့အခြားသူများ (နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအကြား) အတွက်တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်, ငါတို့စိတ်, စိတ်ခံစားမှု, ခံစားချက်တွေကိုနှင့်ပင်ငါတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များရန်။ အားလုံးချိတ်ဆက်ရရန်ယှဉ်ပြိုင်။ အချိန်တိုင်းတွင်ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များနှင့်ချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့ကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေပြီး၊ အခြားလူသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသီးခြားခွဲထုတ်သည်။
လက်ခံမှုနှင့်လက်ခံမှုခံစားချက်များကိုစွဲလမ်းနေသည့်စိတ်ပျက်စရာများကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းနည်းလာသည်virtual လူမှုပတ် ၀ န်းကျင်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အပျက်သဘောအတွေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါကြောင့် Hacker တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ "ပိုကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်" လို့လည်းအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေးအခေါ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုတွန်းလှန်ခြင်းဖြင့်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးချခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအခြားသူများ၏လိုချင်သောအပြုအမူများ၊
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းအားဖွင့်ဆိုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ခြယ်လှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းများကိုတားဆီးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုမည်သည့်နေရာတွင်အာရုံစိုက်သည်ကိုကိုယ်တိုင်သတိပြုခြင်းသည် Hacker အတွေးအခေါ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုသည်မှာမည်သည့်သွင်ပြင်ကိုမဆိုဆွဲဆောင်သောလုပ်ငန်းစဉ်၏တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ ဝေဖန်တွေးခေါ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိတွေ့မိသည့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုသတိပြုမိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုတာ ၀ န်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည်ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဟက်ကာများလုပ်ခြင်း၊ ဟက်ကာကဲ့သို့စဉ်းစားတွေးတောခြင်းအတွက်ပျော်စရာများစွာဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာဖြစ်ခြင်း၊ ပြုခြင်းနှင့်စဉ်းစားတွေးတောခြင်းဟူသည်ဟက္ကာကဲ့သို့အားထုတ်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများစွာလိုအပ်သောပျော်စရာမျိုးဖြစ်သည်။ သူသည်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုကိုဟန့်တားခြင်း၊ အသိဥာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်း၊ မိမိ၏အဖြစ်မှန်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများအတွက်လေ့ကျင့်ထားသောစနစ်အတွင်းရှိအရေးကြီးသည့်အရာများနှင့်အဆက်မပြတ်သဘောမတူခြင်းတို့ကြောင့်ဟက်ကာတစ်ယောက်သည်အတွင်းစိတ်၊ ပိုဆိုးတာကထာဝရကောင်းတယ်၊ အဆင်ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်တယ်။
များစွာသောအခြားအရာများကသူတို့၏ "Anti-System" predisposition စသည့် Hacker ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။သို့သော်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာများကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်းသည်သူတို့အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ဘဲပြင်းထန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုသဘောထားသည်ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
အဓိကအားဖြင့်အခြားသူများအတွက်ကြီးသောအရာများပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်သော“ လူတိုင်းတွင်ရှိသည့်ဟက်ကာ” ကိုဤထုတ်ဝေမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » Hacking - ဒါဟာအရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရုံသာမကဘဲအရာရာကိုပါစဉ်းစားသည်
ထူးကဲသောရက်သတ္တပတ်စတင်။ $ -> Happy_Hacking
မင်းကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ငါအရမ်း ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့အကောင်းမြင်မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Git 2.21.0 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
ဘလော့ဂါများ - အနာဂတ်ရဲ့ပညာရှင်များ။ အခြားသူများစွာထဲမှ!